နေအိမ် » မဟာဗျူဟာ » NINJAGO: Spinjitzu တပ်များ DX
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: NINJAGO: Spinjitzu တပ်များ DX
ဖေါ်ပြချက်: ဂိမ်း NINJAGO Play: Spinjitzu တပ်များ DX ။ ရဲ့လေ့ကျင့်ရေး Ninja ကိုကျွမ်းကျင်မှုစို့။
ကစား: 1,860,117 tag ကို: နင်ဂျာ, နင်ဂျာဂိမ်း, ဆာမူရိုင်း, ဆာမူရိုင်းဂိမ်း, ninjago, ninjago ဂိမ်း
ဝှက်ထားသော templeunlock ၏ဒဏ္ဍာရီအတိတ်
သူတို့ကတောတွင်းစူးစမ်းလေ့လာနှင့် Olmec ရဲ့ဗိမာန်တော်၌ဝှက်ထားသောလျှို့ဝှက်ချက်များကိုသော့ဖွင့်အဖြစ်သူတို့၏စွန့်စားမှုအပေါ် Sadie, နောဧနှင့် Dudley Join! က Hidden ဗိမာနျတျောသော့ဖွင့်၏ Legends အတိ, တစ်ဦးအခမဲ့အွန်လိုင်းပဟေဠိဂိမ်းထဲမှာသင်တောတွင်းသို့လှဲချကြသည်နှင့် conq ရမယ်
အခခြှေဲ hit ဂိမ်းကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဖို့နောက်ဆက်တွဲ! ပိုများသောအဆင့်သစ်အသံနှင့်ပိုပြီးရယ်စရာ stickmen သတ်ဖြတ်မှု! သင်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှအတိုင်းလူအတော်များများသတ်ပစ်!
သူတို့ကသူတို့ရဲ့အသစ်အပြိုင်အဆိုင်အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားအဖြစ် Kid Fury နှင့်သူ၏မိတ်ဆွေများက Join! သင်၏မိတ်ဆွေများမှ Legends ၏ဝေမျှမယ်တိုက်ပွဲများ။
ကမ္ဘာ့အကိုစား cho'gath ဒဏ္ဍာရီ၏လိဂ်
ဤသည်ကြီးမားသောနဂါးသငျသညျလိုအပျ! သင်အမှန်တကယ်ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေကြသည်အကြောင်းမရှိ, ရှိသမျှအစာကို ယူ. ကိုဖကျြဆီးအားလုံးအဆောက်အဦးများနှင့်လူသတျဖို့ကွိုးစားပါ! ဂိမ်း vanquish ဖို့အားလုံးကိုအကြံပေးချက်များကိုသုံးပါနှင့်အရာခပ်သိမ်းကိုပြု! အကြှနျုပျတို့သညျကစီမံခန့်ခွဲမည်ကိုငါသိ၏။
ထိန်းချုပ်မှုယာဉ်3- နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲ
ControlCraft3အစာရှောင် paced အရေးယူမှု-မဟာဗျူဟာဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ရန်သူထိန်းချုပ်မှုအချက်များတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်သင်၏တပ်များဆင့်ဆိုလော့။ တပ်များနှင့်နည်းဗျူဟာစွမ်းရည်၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုအသုံးချရန်။ စစ်တိုက်ခြင်းငှါအပူစဉ်အတွင်းအခါ, ဘယ်မှာနှင့်မည်သို့တိုက်ခိုက်ရန်၏နည်းဗျူဟာဆုံးဖြတ်ချက်များ Wi လိမ့်မည်
အပင် vs ဖုတ်ကောင်အလှတရားမိန်းကလေး
ဖုတ်ကောင်ကလူပြန်ပေးဆွဲ! ကိုသင်သတိထား human.Be ကယ်တင်ရန်သူတို့ကိုသတ်ပစ်ရမလဲသင် undesignedly ကိုလူကိုသတ်လျှင်, သင်သေဆုံးလိမ့်မည်!
ဒါဂတ်စကာ၏ပင်ဂွင်းငှက်များ: မှူး skidoo
Crazy ရှစ်တစ်ရှုးဂိမ်းထဲမှာ Penguins Join!